DepositPhotos: Reverse Image Lookup ဖြင့်စျေး ၀ ယ်နိုင်သည်။ | Martech Zone
စနေနေ့, ဇန်နဝါရီလ 2, 2021 စနေနေ့, ဇန်နဝါရီလ 2, 2021 Douglas Karr
တစ်တန်သုံးတယ် မူပိုင် - အခမဲ့စတော့ဓာတ်ပုံများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်များ၊ ဘလော့ဂ်ပို့စ်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဖောက်သည်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သောအကြောင်းအရာများအားလုံးမှကျွန်ုပ်တို့၏စတော့ရှယ်ယာဓာတ်ပုံဥပဒေကြမ်းသည်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာရာနှင့်ချီ။ ရှိသည်။ ဒီအကောင့်ကိုငါဖြည့်လိုက်တာနဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမှာအချည်းနှီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ လူသိများတဲ့ stock photo site တစ်ခုနဲ့ဈေးကြီးပေးရတာ။
Royalty-Free သို့မဟုတ် RF ပုံရိပ်များသည်အသုံးပြုမှုတစ်ခုစီအတွက်ပေးစရာမလိုဘဲရုပ်ပုံများကိုကန့်သတ်အသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဆိုက်အတွက်မူပိုင်ခွင့်ကင်းသောပုံရိပ်တစ်ခုဝယ်ယူပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အပေါင်ပစ္စည်းများတွင် (ရောင်းချသူပေါ် မူတည်၍) ထပ်ခါထပ်ခါအသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုပြန်လည်ရောင်းချခြင်း (သို့) အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အတွက်အသုံးပြုပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အပေါင်ပစ္စည်းအတွက်လည်းအသုံးမပြုနိုင်ပါ။ အသုံးပြုမှုအပေါ်ကောင်းမွန်သောပုံနှိပ်စာဖတ်ခြင်းအတွက်အလွန်သတိထားပါ။ အချို့သည်စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောသီးသန့်အတွက်သာအသုံးပြုသည်။ အချို့မှာအကြိမ်အရေအတွက်သို့မဟုတ်သုံးစွဲမှုအရေအတွက်နည်းပါးနိုင်သည်။
သင်၏မူပိုင်ခွင့်ကင်းသောပုံများပေါ်တွင်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကိုသင်ချိုးဖောက်ပါကအခွင့်အရေးပိုင်ရှင်ထံမှစာတစ်စောင်နှင့်ထိမိနိုင်သည်။ အလွဲသုံးစားမှုအတွက်သူတို့ကဒေါ်လာရာနဲ့ချီတဲ့ဒေါ်လာအမြောက်အများကိုလိုချင်တယ်။ အကယ်၍ သင်မလိုက်နာလျှင်ဥပဒေအရအရေးယူလိမ့်မယ်။ လူအများစုကသူတို့သင်ခန်းစာကိုသာယူပြီးငွေတောင်းခံ။ ဆက်သွားကြသည်။
သိုလှောင်ထားသည့်ဓာတ်ပုံများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များစွာရှိပြီးပလက်ဖောင်းအများစုသည် point system ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ခရက်ဒစ်များကိုဒေါ်လာသို့ဘာသာပြန်ရန်သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည်။ တချို့ကပုံရဲ့အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပြီးနည်းနည်းစီရတယ်၊ တချို့ကပုံတစ်ပုံကိုဒေါ်လာအတော်များများရှိတယ်။ ထို့အပြင်အခြားသူများအသုံးပြုမှုအတွက်ပုံတစ်ပုံလျှင်ကုန်ကျစရိတ်များမှာ!
ကျွန်တော်တို့လုပ်တာတွေအားလုံးအတွက်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ပေးရတာကိုမပေးချင်ဘူး။ လူများသည်လှပသောပုံရိပ်တစ်ခု၏ဆက်သွယ်မှုကိုသူတို့ကြိုးစားသည့်မက်ဆေ့ခ်ျအပေါ်သက်ရောက်မှုအလွန်အမင်းလျှော့တွက်သည်။ ထို့အပြင်ဂူဂဲလ်ပုံရှာဖွေမှုကိုသုံးပြီးမူပိုင်ခွင့်ကင်းလွတ်သည့်ရှာဖွေမှုပေါ်တွင်မှီခိုနေရသူများသည်ဒုက္ခရောက်ရန်တောင်းဆိုနေကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံပုံတစ်ပုံကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့် Google Image Search သည်၎င်းကိုအလွဲသုံးစားလုပ်သည့်ဆိုက်မှရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး၎င်းသည်မရရှိလျှင်မူပိုင်ခွင့်ကင်းလွတ်ကြောင်းပြသသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြင်အာရုံလောကတွင်နေထိုင်ကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အကြောင်းအရာအတွက်ဒေါ်လာရာနှင့်ချီပေးဆပ်ရန်ဆန္ဒရှိပါကလှပသောပုံရိပ်တစ်ခုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်မဆင်ခြင်နိုင်ပါ! ပြီးတော့ DepositPhotos က Reverse Image tool ကိုသူတို့ရောစပ်လိုက်တာပဲ။ ဓာတ်ပုံများအပြင်၊
Vector ပုံများ - အဖြူရောင်စာရွက်သို့မဟုတ် infographic ကိုသူတို့၏မယုံနိုင်လောက်ဖွယ် iconography အစုံများနှင့်အခြားအရာများဒီဇိုင်းဆွဲရန် ဦး စွာစတင်ပါ vector ပုံရိပ်တွေ.
သရုပ်ဖော်ပုံများ - အားနည်းချက်ကိုမလိုအပ်ဘူးလား။ ရုံ download လုပ်ပါ မူပိုင် - အခမဲ့သရုပ်ဖော်ပုံများ မင်းလိုအပ်တယ်
ဗီဒီယိုများ - သင်၏နောက်ခံနောက်ခံအတွက်စတော့ရှယ်ယာဗီဒီယိုအချို့သို့မဟုတ်သင်၏နောက်ဗီဒီယိုရောစပ်ရန်အတွက်အချို့သောဗွီဒီယိုများကိုထည့်သွင်းလိုပါသလား။ သူတို့မှာရွေးချယ်စရာကောင်းတယ်။
အယ်ဒီတာဓာတ်ပုံများ - စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောရုပ်ပုံများကိုရှာဖွေနေပါသလား။ အယ်ဒီတာ့အာဘော်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကျော်ကြားသောဓာတ်ပုံများစွာတွင်သူတို့တွင်ရှိသည်။
ဂီတ - Podcast တခုခု (သို့) ဗွီဒီယိုမိတ်ဆက်နဲ့ outro အတွက်တေးဂီတလိုအပ်လား သူတို့မှာကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်မှုလည်းရှိတယ်။
ဒါဟာအသင်းမှာသည်အထိဖြစ်ခဲ့သည် Depositphotos ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်နှင့်ကျွန်ုပ်ရရှိသောစတော့ရှယ်ယာဓာတ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းကျွန်ုပ်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရာကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သည်ထက်များစွာပိုက်ဆံဖြုန်းနေကြောင်းသဘောပေါက်မိသည်။ ယခုငါတို့စပွန်ဆာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စတော့ရှယ်ယာဓာတ်ပုံများကိုထောက်ပံ့ဖြစ်ပါတယ် Martech Zone ငါကဲ့သို့သောအခြားကုမ္ပဏီများသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မယုံနိုင်စရာသဘောတူညီချက်ဖြစ်သော်လည်းသင့်အတွက်စျေးနှုန်းမှာလည်းအံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။
တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၃၉ အနိမ့်ဆုံးအထိ ၅ ဒေါ်လာအထိအသုံးပြုနိုင်သည် မူပိုင် - အခမဲ့စတော့ရှယ်ယာပုံများ ထံမှထံမှလစဉ်လတိုင်း! ၎င်းသည်မယုံကြည်နိုင်လောက်သောစျေးနှုန်းနှင့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၊ ၀ က်ဘ်ဒီဇိုင်းများနှင့်ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာများကိုထုတ်လုပ်သောပျမ်းမျှစီးပွားရေးအတွက်ကောင်းမွန်သည်။ မင်းရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျထဲကိုမင်းပုံမပါတဲ့ပုံတစ်ပုံထည့်ပြီးမင်းရဲ့ရလဒ်တွေဘယ်လိုတိုးတက်လာမယ်ဆိုတာမြင်ရလိမ့်မယ်။
For Up လုပ်ရန်
ထုတ်ဖော်: ငါတို့အသုံးပြုနေပါတယ် Affiliate link ကို ဒီ post ထဲမှာ DepositPhotos များအတွက်!
Tags: သောင်းကျန်းသူအွန်လိုင်းပုံများကိုရှာပါgoogle ပုံရှာဖွေခြင်းပုံကိုပြောင်းပါimage lookuprfမူပိုင်ခွင့်အခမဲ့မူပိုင် - အခမဲ့စတော့ဓာတ်ပုံများငှေကွေးထောကျပံ့သူဓာတ်ပုံ